Wararka - “Xaddidaadda balaastigga” ee horumarka leh: horumarinta balaastikada wax -yeeli kara waa aasaas
Bacda Cuntada Caaga ah
Bacda Waxsoosaarka Caaga
Bacda Raashinka Caaga ah
Bacda Funaanadda Caaga ah
Bacda Carrier Caaga ah
Bacda Gacanta ee Caagga ah
Samee Boorsada Dukaameysiga
Bacda Xarigga Caagga ah
Boorsada Qashinka ee xidigtu ku xidhan tahay
Boorsada Qashinka oo lagu xiray
Bacda Qashinka ee Caagga ah
Bacda Qashinka Udgoon leh
Bacda balaastikada ah ee nooleyn karta
Boorsada Xurmaysan ee EPI
Bacda Gacanta Ka Go'an ee Dhimatay
Bacda Rootiga Caagga ah
Filimka Baakadaha Caaga ah ee Polyetylen
Film Fidinta Caaga
Alaabooyinka La tuuro ee caaga ah
Gacmo -gashiyada la tuuri karo
Maro Jadwalka La Tuuro
Bacda Biohazard Caaga
Boorsada Poly Poly Self
Horumarka “Xaddidaadda balaastigga”: horumarinta balaastikada nooleyaasha ah waa aasaas
Bishii Disembar 31, 2018, Wasaaradda Deegaanka ayaa xaqiijisay in suuqyada waaweyn ee dalku ay mamnuucayaan adeegsiga bacaha hal mar la isticmaalo laga bilaabo 2019 si loo sii yareeyo “wasakheynta cad.”
Baarlamaanka Yurub ayaa sidoo kale ansixiyay waxa ay ugu yeereen “mamnuucidda ugu weyn ee balaastigga taariikhda,” oo mamnuucaya dhammaan badeecadaha caagga ah ee hal mar la isticmaalo oo laga samayn karo agabyo kale sida kartoonnada laga bilaabo 2021 guud ahaan Midowga Yurub.
Dhammaadkii 2007, Xafiiska Guud ee Golaha Dawladdu wuxuu soo saaray mamnuucidda wax soo saarka, iibinta iyo isticmaalka bacaha aadka u khafiifka ah ee dhumucdoodu ka yar tahay 0.025 mm laga bilaabo Juun 1, 2008, iyo adeegsiga bacaha wax iibsiga ee caagga ah ayaa la bixin doonaa loogu talagalay.
Nasiib darro, 10 sano ka dib mamnuucidda, fikradda ah bixinta bacaha caagga ah ayaa laga hirgaliyay suuqyada waaweyn ee wax laga iibsado, laakiin wasakhaynta caddaanka wax badan lagama dhimin. Muddo ka dib, iibsashada bacaha waxay noqotay il dakhli joogto ah oo laga helo suuqyada waaweyn.
Suuqyada hilibka, dukaammada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, dukaamada waddooyinka, saldhigyada jidadka iyo meelaha kale ee “dhintay”, bacaha caatada ah ee aadka u khafiifka ah ayaa weli ah adeegsi “eber”, waxay noqdeen qaybinta caadiga ah ee alaabta la iibiyay.
Si kastaba ha ahaatee, 10 -kii sano ee la soo dhaafay, isbeddello waaweyn ayaa ka dhacay dhaqaalaha iyo bulshada. Bixinta cuntada iyo gaarsiinta degdegga ah ayaa noqotay macmiil weyn oo bacaha. Warshadaha gudbinta degdegga ah ee Shiinaha ayaa cunay qiyaastii 14.7 bilyan oo baco laga bilaabo 8.268 bilyan sannadkii 2008 illaa 2016, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Xafiiska Boostada ee Dawladda. Xogta dadweynaha ayaa sidoo kale muujisay in ku dhawaad ​​20 milyan oo amarro ah la saaray sedexda meelood ee ugu waaweyn ee cuntada lagu bixiyo ee Shiinaha, iyadoo hal amar la isticmaalayo ugu yaraan hal bac.
Chen Zhongyun, oo ah borofisar ku xeel dheer Jaamacadda Shiinaha ee Sayniska Siyaasadda iyo Sharciga, ayaa sheegay in silsilad deegaanka oo dhammaystiran laga soo saaray wax soo saarka, iibinta iyo dib -u -warshadaynta bacaha caagga ah waa in lagu dejiyaa siyaasadda iyo heerka fulinta, iyo siyaabo badan oo suuqyo kala duwan leh waa in loo adeegsadaa xakamaynta wasakheynta cad iyada oo loo eegayo in la yareeyo kharashaadka bulshada.
“Waa wax aan macquul ahayn in la xaddido oo la mamnuuco isticmaalka alaabta si indho la’aan ah. Waxay yeelan doontaa xoogaa saameyn ah, laakiin saameyntu ma muuqan doonto. ” Sida laga soo xigtay Che Zhenming, oo ah borofisar wax ka dhiga Iskuulka Cuntada iyo Biyooloojineering ee Jaamacadda Xihua, xalka ugu muhiimsan waa in la horumariyo balaastikada nooleyn karta.
Su'aalaha ku saabsan alaabtayada ama qiimeeyaha, fadlan noo dhaaf emailkaaga oo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.Wax soo baara
Waqooyiga Jidka 350 mitir galbeed Galbeed
Saldhigga Baska ee Giraanta Dibadda, Magaalada Yucheng,
Maryaha la tuuri karo